Warbixin la xiriirta cudurka cabuqa Ee cronavirus fadlan si taxadar leh U aqri – Damqo
Warbixin la xiriirta cudurka cabuqa
Ee cronavirus fadlan si taxadar leh
*WAXAA MAANTA IDIIN HAYAA WAR BIXIN UMMADA SOMALIDA EE ADUUNKA KU NOOL OO DHAN MUHIIM U AH*
*Warbixintan waxaan ka soo ururiyay dhowr guddi oo dhakhaatiir ah oo ka hawl gala waddamada UK, China, Japan iyo Taiwan.*
*1. Sankaada hadday biyo ka socdaan ama uu qoyaan yahay duuf, ha nixin ee waxa ku haayo waa hargab caadi ah…*
*2. Qufaca Coronavirus-ka waa mid qallalan, mana jiro qoyaan ama duuf kaa soo daadanaya.*
*3. Guddigaan dhaqaatiirta ah waxay isku raaceen oo ay caddeeyeen in Virus’kan uu xamili karin kulayl yar, waxaa dili kara heer kul gaadhsiisan 26/27 degrees. Sido kale Cadceedu way dishaa markiiba.*
*4. Qof qaba virus’kan hadduu hindhiso ama qufaco markiiba virus’ku dhulka ayuu ku dhacaa, taas oo ka dhigan hawada inuusan raaci karin.*
*5. Dhaqaatiirtaan Waxey cadeeyeen in Viruskani hadduu fuulo bir ugu yaraan 12 saacadood inuu noolaan karo – Haddabo hadaad joogto meel uu virus’kani ka dilaacay oo biraha baabuurta iyo wixii la mid ah aad taabato, waxey kula talinayaan in markiiba gacmaha aad saabuun ku dhaqato ama in aad isticmaashid alcohol.*
*6. Dharka, alaabta guryaha haddii uu fuulo wuxuu noolaan karaa 6-12 saacadood. Taydh/saabuun caadi ah oo aad ku dhaqdo ayaa dili karta.*
*7. Cabidda biyo kulul waa kuu daawo. Iska ilaali in aad cabto wax qabow.*
*8. Hadii aad joogto waddan lagu sheegay virus-kaan oo Gacmahaaga aad meel ku taabato, isla markiiba dhaq gacnaha, waayo virus’kanu gacmahaaga wuxuu ku noolaan karaa 5-10 daqiiqo oo qudha, laakiin waxaa khatar ah oo ay dhici kartaa 10 daqiiqo gudaheed, waxaad taaban kartaa afkaaga, indhaha ama sanka, halkaasna wuu kugu geli karaa.*
*9. Si fudud ayaad ku dili kartaa viruskan, biyo diirran oo aad cusbo ku dartay ood ku luqluqato ayaa dili karta.*
*10. Deegaan uu ku dhacay hadaad joogto biyo badan cab.*
*1. Marka hore virus’kani wuxuu ku dhacaa cunaha, markaa waxaad dareemi doontaa cuno xanuun muddo ku siman 3/4 casho.*
*2. Kadib wuxuu u gudbayaa dhuunta hawada (trachea) kadib wuxuu usii gudbayaa sanbabada, kadib wuxuu kugu keenayaa oof wareen (pneumonia) taasuna waxay qaadataa 5/6 casho oo kale.*
*3. Oof wareenka ka dib waxaa imanaya qandho zaa’id ah iyo neefsiga oo cidhiidhi kugu noqda.*
*4. Cabudhka caadiga ah la mid ma aha cabudhka virus’kani. Waxaad noqonaysaa sidii qof biyo ku miiq-miiqanaayo oo kale, xaaladan hadaad dareento dhakhtar degdeg ah U tag ama dalbo.*
*TALO kale oo muhiim ah oo ka timid dhakhaatiirta Japan ee virus’kan COVID-19 la tacaalaysa waxey leeyihiin:*
*Qof kasta afkiisa iyo cunihiisu waa inay qoyanaadaan, iska jir inay qallayl noqdaan. Ugu yaraan 15’kii daqiiqoba dhowr jeer biyo kabo.* *Waayo?*
*Hadduu virus’ku cunahaaga gaadho, hadaad biyo ama wax kale cabto virus’ku wuxuu u daadagayaa caloosha, markuu halkaas u daadago aysiidha caloosha ayaa disha virus oo dhan.*
*Haddii aanad had iyo goor aanad biyo cabbin, virus’ku wuxuu gali karaa dhuuntaada hawada ka dib sanbabada. Markaas aad ayey u khatar badan tahay.*
*Xanuunkan Coronavirus waxaa laga yaabaa in maalmo badan aadan isku arkin wax astaamo ah. Markii xumad ku qabad, qufac badan aad yeelato, oo aad Takhtar ku cararto waa mar sanbabkaaga 50% uu dhaawac gaarsiiyay. Sanbabkaagu hadduu daldaloolo, finan (Fibrosis) yeesho daawo ma leh.*
*Dhakhaatiir Taiwan u dhashay waxay sheegeen: haddii aad joogto meel uu virus’kani ka dilaacay waxaa fiican in aad tijaabo iska qaado subax kasta adiga oo gurigaaga jooga si aad u ogaato sanbabadaadu in ay caafimaad qabaan. Qaado neefsi tijaabo ah, amigo Aidan samaynaya neefta isku ceeli muddo 15 sikin ah. Hadaad dhamays tirto adoon qufacin, laabtuna ku xanuunin. Waxay cadayn u tahay in aadan sanbabka ku lahayn Fibrosis, waxay ku tusaysaa oo kale in aadan infection ku lahayn sanbabka.*
*Fadlan sii Faafi oo lasii wadaag ehelkaaga iyo asxaabta. – Digtoonaada.*
Previous Dr Cabdiraxmaan Xoogsade ayaa si aad u wanaagsan noogu faah faahisay Caronavirus
Next Marxuum Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde). Waxuu ahaa halyeey u adeegay shacabkiisa